China Nyowani Kusvika Tsika 55 Colors Hapana Yakavanzika Label Glossy Yakajeka Lip Gloss fekitori uye vagadziri | Weiti
Mutsva Kusvika Kwetsika 55 Mavara Hapana Akavanzika Label Glossy Yakajeka Lip Gloss
1. Ruvara rwe matte lip gloss runako uye runopa mavara akapfuma. Iyo matte pamusoro yakakodzera kune ese-ezuva kusakara pasina kuomesa.
2. Mukombe hauna tsvimbo uye haupere.
3. Yakareba-inogara isina mvura, iri nyore kushandisa mafuta ekuchenesa muromo kubvisa.
4. Yakagadzirwa nezvinhu zvakasikwa, inokodzera mhando dzese dzeganda, kusanganisira ganda rakapfava.
Yakareba kwenguva refu: Iyi yemvura miromo yakasetwa ine pigments inonamira pamiromo yako kwenguva yakareba
Isiri-tsvimbo mukombe: Kunyangwe paine pati kana zuva, iwe unogona kudzivirira mamiriro anonyadzisa uye kugara wakanaka.
Mavara mazhinji: yakajeka sirairi pamusoro, yakajeka uye yakasarudzika ruvara
Hutano uye zvakasikwa:Uyu muromo unokudzwa unogadzirwa nemidziyo yakachengeteka senge wakisi nemafuta akakosha. Chemical-isina, hutano, isina chepfu, yakasimba, inofadza uye yakanaka.
Chipo chakakwana: Ichowo chipo chakakura cheHalloween, Kisimusi, Zuva reValentine, zuva rekuzvarwa, zuva rekuroora, mutambo wekutamba, showa yekugadzira, chipo chekupedza kudzidza, nezvimwe.
LIP ZVIDZIDZO X MULTIPLE COLORS
Ose ari maviri miromo gloss chubhu uye rekunze kurongedza bhokisi rinogona kuverengerwa neako logo.Isu tine yedu fekitori kune vakawanda kuburitsa muromo gloss.Tinogona kuvimbisa mhando yechigadzirwa.
Yakanaka yakanaka & yakanaka miromo yekumisikidza yakatarwa, iri nyore kuitisa ine inoshamisa kara. Chengetedza miromo yako inyorove uye yakagadzikana kwenguva yakareba. Makeup anotaridzika akakodzera kumwaka wese, kunyanya, kudanana, kunotenga, zhizha pati neshamwari.
Gadzira yakasikwa muromo gloss
Matte lip gloss, inonaka
Iwo mavara akajeka uye akazara
Zvinhu zvekunyorovesa, tarisa pamiromo isina kusimba
Kwayedza Ruvara Ratidza
Dhirowa Iyo Yakanaka Miromo Rakaumbwa
Nyorera lipstick uye shandisa penzura yemuromo kuratidza chimiro chemuromo wezasi
Zadza muromo wezasi nemuromo penzura-hafu yechinzvimbo
Nyorera lipstick uye shandisa penzura yemuromo kuratidza chimiro chemuromo wepamusoro
Ingo zadza miromo yese nemiromo
Pashure: Tsika Inopa Rakajeka Ruvara Makeup Lipstick Mvura Mwenje Moisturizer Lip Gloss
Zvadaro: Tongedza Hapana Rudzi Gadzira Yako Yega Plumping Glitter Yakavanzika Label Lip Gloss
Gloss Isina mvura
Matte Velvet Lip Gloss Isinga-Stick Mukombe Haisi T ...
Vatengesi ve Eyelash, Eyelash Kuwedzeredzwa, mink lashes, lipgloss, eyeliner, Ziso Lashes,